Iimveliso zeinjini Umatshini - iimveliso zeinjini zaseChina Abavelisi, abaxhasi
ienjini zokuvelisa amandla
umlilo kunye neenjini zombhobho wamanzi
iiinjini z compressor zomoya
Iinjini zasemanzini kunye neenqanawa
Injini yegesi yendalo
umlilo kunye nompompo wamanzi usete
Izinto ze-enjini yenjini
umlilo kunye namanzi enjini yompompo yezixhobo
Icandelo kunye neNkonzo
Iinjini zokuvelisa amandla ombane-43KW-Y4110D
iinjini zomlilo nezamanzi-29KW-YD480
iinjini zomlilo nezamanzi-55KW-Y4100
ienjini zokuvelisa amandla ombane-350KW-YM6S9L-DA
Njengomakhi wetraktha onamava eTshayina, thina e-YTO sinokwenza iitrektara ezinamavili amaninzi, ezinamandla aqala kwi-18 ukuya kwi-500HP, Ngokwendlela yayo yokuqhuba, itrektara enamavili ngokubanzi inokwahlulwa kwitrektara ye-2WD kunye netrektara ye-4WD. Ngenjini oyisebenzisayo, itrektara enamavili ngokuyintloko ibandakanya i-2 silinda itrektara, 3 isilinda setrylitha, 4 silinda itrektara kunye ne-6 silinda itektala. Ngokwezicelo zayo ezithile, itrektara ingahlulwa-hlulwa ibe yitrekta ...
Iseti yomlilo kunye namanzi
I-YTO AMANDLA yokubonelela ngomlilo wedizili ekumgangatho ophezulu kunye nompompo wamanzi asethelwe ii-cusomers zethu ngeenjini zethu zokuzivelisa, umlilo kunye neseti yethu yokuhambisa amanzi inokudibana neAustralia, Middle East kunye ne-Europe standard, singenza impompo isethwe ngokuhambelana nemfuno ekhethekileyo yoMthengi. Uluhlu lwethu lweempompo zedizili zilungele ukuhanjiswa kwamanzi kumzi-mveliso nakwisixeko, amanzi amdaka, kwaye zisetyenziswa kakhulu ukunkcenkceshela kwezolimo, ukuthutha amanzi amsulwa okanye obunye utywala obunjengokubakho kwendalo nokwenziwa ngemichiza kufana namanzi amsulwa. F ...
Ukudibana kunye nokuVavanywa: 1.First-class kopano line 2.Atlas Copco izixhobo kunye neNdibano yeNdibano. 3.AVL inkqubo yokucoca injini yedizeli 4.Diesel injini yokuvavanya indawo ye-5.Indawo yokuvavanya ukuvavanya nokulawula 6.Indawo yokuhlola injini yegesi YTO AMANDLA anikezela nge-YANGDONG kunye neYTO yecandelo lokuvelisa udizili, amandla ahamba nge-10kva ukuya kuma-500kva, uhlobo oluvulekileyo nohlobo lokuthula, 50HZ kunye no-60HZ. Izinto eziluncedo kunye neNxalenye 1.Iinjini eziveliswe ngokukodwa ukuze ziqinisekiswe ngomgangatho onokuthenjwa, ixabiso elikhulu ...
Thina kwi-YTO AMANDLA sijonge phambili ekusebenzeni nabathengi kwihlabathi liphela ukwenza ikamva elingcono!
Umthendeleko weNtwasahlobo wesiNtu waseTshayina ngo-2020
Sukwenza iNkxaso yokuthengiswa kwamafutha ...
© Copyright - 2019-2020: Onke amalungelo agciniwe. Iimveliso ezishushu - Imephu